HERO OF MYANMAR: ၃ - ၁၁ - ၂၀၁၁ ရက်နေ့ မြန်မာနိုင်ငံသတင်းများ
[14:23 |0ဦးကဆွေးနွေးသွားပါတယ်.. ]
တိုင်းရင်းသားအရေး ဖြေရှင်းပေးရန် ကုလ အထူးကိုယ်စားလှယ်ကို တောင်းဆို - မဇ္စျိမ click here
ငွေစာရင်း ကွာဟမှုကြောင့် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ ၀န်ထမ်း ၃ ဦး အဖမ်းခံရ - ဧရာဝတီ click here
မဟာသီယာ နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့ဆုံမည် - ဧရာဝတီ click here
ဒဲရက် မစ်ချယ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးတွေ့ - ဧရာဝတီ click here
အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် DKBA ဒုတိယ အကြိမ်တွေ့ - ဧရာဝတီ click here
EU ပညာရှင်များပါဝင်သည့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပမည် - ဧရာဝတီ click here
အကူအညီမပေးမီ စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် ဂျပန်ကို တိုက်တွန်း - ဧရာဝတီ click here
မြန်မာကို တင်ပို့မည့် ရူပီးသိန်း ၄၀၀ ကျော် တန်ဖိုးရှိ သစ်နီများ မီဇိုရမ်တွင်ဖမ်းမိ - ခိုနူမ်းထုန် click here
အချက်သုံးချက်အပေါ်ကြည့်ပြီး မြန်မာကို ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှု လျှော့ချသွားမည်ဟု အမေရိကန်ပြော - ဒီဗွီဘီ click here
KIO က တန်းတူရေး ဆွေးနွေးလိုချိန် အစိုးရက အပစ်ရပ်လို - မဇ္စျိမ click here
ကရင်နီပြည် ကောက်ကောက်တွင် ကရင်နီ စစ်ဦးစီးတပ်နှင့် အစိုးရစစ်တပ် ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ် - ကန္တာရဝတီတိုင်းမ် click here
နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ လက်ခံတဲ့ ကချင်ခေါင်းဆောင်တချို့ အစိုးရနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးယူဖို့ KIO ကို စာပို့ - အာရ်အက်ဖ်အေ click here
ရသေ့တောင်ဘက်မှာ နစကတွေ အသတ်ခံရ - ဘီဘီစီ click here
တိုက်ပွဲကြောင့် မြစ်ကြီးနား လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပြတ်တောက် - ဧရာဝတီ click here
အင်းစိန်းထောင်က အစာငတ်ခံဆန္ဒပြသူ အများစု ဆက်ပြီး ဆန္ဒပြနေဆဲ - အာရ်အက်ဖ်အေ click here
မြန်မာ့ နိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်း စနစ်အတွက် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မည်ဟု IMF ပြော - မဇ္စျိမ click here
IMF ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ မြန်မာ ခရီးစဉ်ပြီးဆုံး - ဧရာဝတီ click here
အမေရိကန်ဝန်ကြီး HIV ဂေဟာ လေ့လာ - ဧရာဝတီ click here
အမေရိကန်ဝန်ကြီး HIV ဂေဟာသွား - ဗွီအိုအေ click here
ဦးသန့် အခမ်းအနား Vijay Nambia တက်ရောက်မည် - ဗွီအိုအေ click here
ထိုင်း ရေဘေးဒုက္ခကြုံ မြန်မာအလုပ်သမားများကို သံရုံးကူညီ - ဧရာဝတီ click here
အမေရိကန် ကိုယ်စားလှယ်တွေ NLD ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တွေ့မည် - အာရ်အက်ဖ်အေ click here
မလေးဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း မဟာသီယာ ရန်ကုန်ရောက် - ဗွီအိုအေ click here
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် တနှစ်မြောက်နေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ဖိတ်ကြား - NLD click here
တိုင်းရင်းသားတွေကို ခွဲခြားဆက်ဆံနေတယ်လို့ ENC စွပ်စွဲ - ဘီဘီစီ click here
ရမ်းဗြဲ ကျောက်နီမော်မီး အိမ်ခြေ ၂၀၀ကို ၀ါးမျို၊ လူပေါင်း ၈၀၀ ခန့် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ် - နိရဉ္စရာ click here
ရမ်းဗြဲ မြို့နယ် မီး အိမ်၂၀၀ ပျက်စီး - အာရ်အက်ဖ်အေ click here
မဲဆောက်မြို့ CDC အထက်တန်းကျောင်းအနီး လုယက်မှုဖြစ်ပွား - KIC click here
ကိုယ်ပျောက် ကိုကျော်ဆန်း - ဧရာဝတီဘလော့ဂ် click here
ထုတ်ပယ်ခံရ ဥက္ကဋ္ဌ - အာရ်အက်ဖ်အေ click here
မတရားတဲ့စီရင်မှု ရှမ်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမိသားစုများ တိုင်ကြား - ဗွီအိုအေ click here
နောက်ချန် သီးလေးသီး အဖွဲ့သားများ ပြန်ရက်သတ်မှတ် - မဇ္စျိမ click here
ကမာရွတ်မြို့နယ် အထက (၂) မှ ကျူရှင်မယူတဲ့ ကျောင်းသားများရဲ့ ဒုက္ခ - နေ့သစ် click here
Images of A River, The Irrawaddy – ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းစာအုပ် စာကြည့်တိုက်များသို့ လှူဒါန်းပွဲ - မိုးမခ click here
ရေကြီးမှုကြောင့် ကြက်သွန်ဈေးခုန်တက် - ဘီဘီစီ click here
ကလေးတွေဖမ်းတယ်ဆိုတာ ကောလဟာလလား တကယ်လား - ဧရာဝတီဘလော့ဂ် click here
အစိုးရဓာတ်ဆီဈေး သတ်မှတ်ဈေးထက် နှစ်ဆနီးပါး မြင့်နေ - ဒီဗွီဘီ click here
မြန်မာနိုင်ငံအရေး - နော်ဝေး ဒု-နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကို မေးမြန်းခြင်း - ဒီဗွီဘီ click here
ဒီချုပ် မှတ်ပုံတင်ပါ - မဇ္စျိမ click here
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအရေး မြန်မာမိသားစုတွေရဲ့ အရေး (ဦးဝင်းတင်နဲ့မေးခွန်းများ) - မိုးမခ click here
ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေတော့ ပြင်ပြီ . . . (ရုပ်သံ) - ဧရာဝတီဘလော့ဂ် click here
ချိုတူးဇော်နဲ့ စကားလက်ဆုံ (၄) နောက်ဆုံးပိုင်း - မိုးမခ click here
ဓာတ်ပုံများက နိုင်ငံရေးကို ပြောနေသည် - ဧရာဝတီ click here
ဘ၀ကုန်ဆုံးလုနီးသူတို့အတွက် ယာယီခိုလုံခွင့်တော့ ပေးသင့်သည် - ဒီဗွီဘီ click here
ပြည့်တန်ဆာများအတွက် ပညာပေးသင်တန်းကို ရဲဝန်ထမ်းပါ တက်ရောက်မည် - KIC click here
ဆရာကြီး ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် (သိုိ့မဟုတ်) မြန်မာ့သမိုင်းတကွေ့မှ အထင်ကရ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တဦး - မိုးမခ click here
လက်လွှတ်လိုက်တဲ့ ပင်လယ် - မိုးမခ click here
အယုဒ္ဓယရောက် မြန်မာများ နှင့် ရေဘေးကူညီမှု (ဓာတ်ပုံသတင်း) - မိုးမခ click here
ရန်ကုန်မြို့မှ ရှင်ပြုနားသပွဲ (ဓာတ်ပုံသတင်း) - မိုးမခ click here
စားဖိုမှူးကျော်သူ – ၅၂ (ဓာတ်ပုံသတင်း) - မိုးမခ click here
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် မဟာသီယာ ရန်ကုန်မှာ တွေ့ click
- မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် အာဆီယံနှင့် ပိုမိုပူးပေါင်းရန်လိုကြောင်း မဟာသီယာ တိုက်တွန်း click
- ဂျာမန် ဒု-နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့မည် click
- ဗွီဂျေနမ်ဘီယား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့မည် click
- အမျိုးသား​ဒီမိုက​ရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီမှတ်ပုံတင်သင့်​ မတင်သင့်​ (အထူးကဏ္ဍ) click
- ဓာတုလက်နက် အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် မင်းအောင်လှိုင်အား ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ နှင့် လွှတ်တော်မှ အရေးယူပေးရန် တိုက်တွန်းတောင်းဆိုချက် click
- ကရင်နီပြည် ကောက်ကောက်တွင် ကရင်နီ စစ်ဦးစီးတပ်နှင့် အစိုးရစစ်တပ် ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ် click
- KIA နှင့် အစိုးရတပ်တို့ မုံးကိုးတွင် တိုက်ပွဲဖြစ် click
- အစိုးရက ကေအိုင်အိုကို ငြိမ်းချမ်းရေး ထပ်မံကမ်းလှမ်း click
- ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရန် KIO ကို ထပ်မံကမ်းလှမ်း click
- အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် DKBA ဒုတိယအကြိမ် တွေ့ click
- နအဖတပ်များ ဒီကေဘီအေဌာနချုပ်အနားမှ ဆုတ်ခွာ click
- အပစ်ခတ်ရပ်ရေး ဒီကေဘီအေနှင့် အစိုးရ ဆွေးနွေး (မေးမြန်းခန်း) click
- တိုင်းရင်းသားအရေး ဖြေရှင်းပေးရန် ကုလ အထူးကိုယ်စားလှယ်ကို တောင်းဆို click
- တိုင်းရင်းသားများအား အစိုးရသစ် နည်းနှစ်သွယ် ပူး၍ သုတ်သင်ဟု ENC ပြော click
- ရှမ်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမိသားစုများ မြန်မာ့လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ထံ တိုင်ကြားစာပို့ click
- ထောင်တွင်း အစာငတ်ခံဆန္ဒပြမှု မဖြေရှင်းပေးသည့်အတွက် လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ကို တိုင်မည် click
- ဗိုလ်ကြီးဟောင်း နေမျိုးဇင်အမှု နေပြည်တော် ဆက်တင်မည် click
- နိုင်ငံရေးသမား ဘာကြောင့် လျှော့ရက် မရသလဲ click
- လွှတ်တော်အမတ်နှစ်ဦး အမတ်အဖြစ်က ပယ်ဖျက်ခံရ click
- သျှမ်းပြည်နယ် လွှတ်တော်အစည်းအဝေး အချိန်နည်းပါး၊ လွှတ်တော်အမတ်များ အားမလိုအားမရဖြစ် click
- ကျောက်ပန်းတောင်းတွင် စစ်ဗိုလ်ဟောင်းက လူသတ် ပစ္စည်းလု click
- သမ္မတကြီး ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ click
- သမ္မတ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ?? click
- သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး - ၇ (အောက်မေ့ဖွယ်) click
- အမှန်ကို အမှားဖြစ်အောင် မတရား ဖိအားပေးနေတဲ့ သာသနာရေးဝန်ကြီး (ပေးစာ) click
- EU ပညာရှင်များ ပါဝင်သည့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပမည် click
- နေရပ်ပြန် အလုပ်သမားများအတွက် ထိုင်း-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးတံတား ဖွင့်ပေး click
- အလုပ်သမား ၁၀၀ ပြန်ဖို့ မြ၀တီတံတား ယာယီဖွင့် click
- ရေဘေးဒုက္ခသည်များကို ချစ်ကြည်ရေး တံတားပေါ်မှ ကြိုဆိုခွင့်ရ click
- မြန်မာရေဘေးဒုက္ခသည်များကို မြန်မာသံရုံးက ယာယီနိုင်ငံကူး လက်မှတ်လုပ်ပေးနေ click
- ရေဘေးအလုပ်သမားများကို မြန်မာသံရုံး ကူညီ (ရုပ်သံ) click
- ကရင်နီဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ရေကြီးပြီးနောက် ကုန်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာ click
- ကရင်နီဒုက္ခသည် သက်ကြီးရွယ်အို မိမိကိုယ်ကို အဆုံးစီရင် click
- ဂျပန်ရောက် ကရင်ဒုက္ခသည်မိသားစုအချို့ နေရပ်ပြန်လိုကြ click
- ငွေစာရင်း ကွာဟမှုကြောင့် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ ၀န်ထမ်း ၃ ဦး အဖမ်းခံရ click
- အနံ့အသက်မကောင်းသည့် စားအုန်းဆီကို ပြုပြင်ပြီး ပဲဆီအဖြစ် ရောင်းချနေ click
- ရိုဟင်ဂျာသည် နိုင်ငံသား၊ တိုင်းရင်းသားနှင့် မြန်မာမျိုးနွယ်စု ဟုတ်မဟုတ် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း click
- ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာက ဧရာဝတီချစ်သူများ click
- မြစ်တစင်း၏ပုံရိပ် ဧရာဝတီ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းစာအုပ် စာကြည့်တိုက်များသို့လှူဒါန်းပွဲ (ဓာတ်ပုံသတင်း) click
- ချိုတူးဇော်နဲ့ စကားလက်ဆုံ - ၄ (နောက်ဆုံးပိုင်း) click
- အလွဲများနဲ့ မျဉ်းပြိုင် - အပိုင်း (၂) (ဆောင်းပါး) click
- အိမ်ကလေး - ၉ (၀တ္ထုတို) click
- လက်လွှတ်လိုက်တဲ့ ပင်လယ် (ကဗျာ) click
- ရန်ကုန်က သူငယ်မ click
- ဘန်ကောက် ရေကြီးမှုအခြေအနေ click
- ရေထဲရောက် ဘန်ကောက် (ဓာတ်ပုံသတင်း) click